ပုံဆွဲစကေး 1: 12345678910
လှေကားရဲ့ width Z
အဆင့်များအားလုံးအရေအတွက် C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
rotary အဆင့်အရေအတွက် C2 234567891011121314151617181920
အောက်ခြေအဆင့်အရေအတွက် C1 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
string ကို၏အထူ T
ပြပွဲ risers H
Z - လှေကားရဲ့ width
W - အဆင့်များ၏အထူ
C1 - အနိမ့်ချီတက်ပွဲအတွက်ခြေလှမ်းများ၏အရေအတွက်ကို
C2 - rotary အဆင့်အရေအတွက်
rotary အဆင့်ဆင့်၏အကောင်းဆုံးအရေအတွက်လစာအာရုံစူးစိုက်မှုကိုတွက်ချက်တဲ့အခါ။ အကြှနျုပျ၏အတှေ့အကွုံခုနှစ်တွင်လှေကားနှင့်အတူအကောင်းဆုံး 3-အဆင့် 80 စင်တီမီတာအကျယ်။ ပိုများသော - ခြေလှမ်းများကျဉ်းဒါမသက်မသာဖြစ်ရလိမ့်မည်။
ကွာဟချက်လှေကားထိပ်ကိုကျော်ရုံသည်ဆိုပါက, ကဦးခေါင်းကိုဒဏ်ရာကိုရှောင်ရှားရန်, ထပ်ဖို့အလှည့်အရာ၌အရေးကြီးသောမြင့်သည်။ ကအနည်းဆုံး2မီတာဖြစ်သင့်သည်။
ဒီဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူလှေကားအကျယ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ခြေလှမ်းများလှည့်များ၏လွယ်ကူခြင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်။ လှေကားအကျယ်ပြန့် - ခြေလှမ်းများ၏အရအေတှကျ သာ. အဆင်ပြေ၏ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
သောကြောင့်စီမံကိန်းများနှင့်အဆောက်အဦများ၏မတူကွဲပြားမှု၏, ထိုအစီအစဉ်အတွက်လှေကားအဘို့အ handrails တွက်ချက်ခြင်းနှင့်မပြနိုင်ပါ။
အရေးကြီးသော! ကွေ့ခြေလှမ်းများ၏ရှုထောင့်မှအာရုံစိုက်။ စင်မြင့်၏အရွယ်အစားအရ - အ protrusion ပမာဏ၏အရွယ်အစားကိုထည့်သွင်းဖို့မမေ့မလြော့ပါ။
ထိုကျောက်လှေကားတွက်ချက်မှုသစ်သားသို့မဟုတ်သတ္တုလှေကားများ၏တွက်ချက်မှုအဘို့အဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြားနားသည်။ အဓိကအရာ - အဆင့်ဆင့်၏အရွယ်အစားတွက်ချက်ရန်။ သူတို့ရဲ့အမြင့်အားလုံးစိတျအပိုငျးအတှကျတူညီဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအဓိကထောင့်နှင့်ရှုထောင့်နှင့်အတူ rotary အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအသေးစိတ်အစီအစဉ်လှေကားဆွဲလိမ့်မယ်။